Beela Uummata Fixaa Jiru Dhoksuu Yaaluun Yakka Guddaadha – YEROOBLOG
Beela Uummata Fixaa Jiru Dhoksuu Yaaluun Yakka Guddaadha
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia	 November 17, 2015 December 25, 2015 2 Minutes
Yeroo amma kanatti uummanni Itoophiyaa miiliyoona 15 ol ta’an beelaaf saaxilamanii jiru. Bokkaan arfaasaa fi ganna roobuu qabuu osoo hin roobiin waan hafeef, namoonni midhaan nyaata osoo hin facaafatiin hafaniiru. Sababa hanqina bishaaniifi kalootiin, loon saanii kumaatamatti lakkaa’aman jalaa dhumaniiru; dhumaas jiru. Namoonni kunniin amma waan afaan kaa’atan tokkollee of harkaa hinqaban. Mootummaan gargarsa namoota googinsaan miidhaman kanaaf godhamaa jiru gahaa miti akkasumas hatattamaan raawwatamaa hinjiru. Mootummaan ADWUI beela Itoophiyaa keessatti bara kana mudate dhoksuuf yaalaa tureera.
Haata’u malee, miidiyaaleen idil-addunyaa (BBC, ALjazeera kkf) dhimma kana gabaasuu waan jalqabaniif , abbootiin aangoo ADWUI, lakkoofsa namoota gargaarsa barbaadani, miiliyoona afur akka ta’e ibsuu danda’aniiru. Lakkoofsi namootaa gargaarsa barbaada jedhanii ibsanii yeroo sanatti sirrii waan inturreef, ji’a tokko booda lakkoofsi namoota beelan miidhamaa jirani miiliyoona 8.2 akka ta’e ibsuun, gargaarsaa uummata addunyaa gaafatan. Haata’u malee lakkoofsi uummata gargaarsa hatatamaa barbaadu dhuma bara 2015tti miiliyoona 15 ta’u akka danda’u Mootummaan Gamtoomani (UN) akeekkachiiseera.
Garuu, hooggatoonni ADWUI, beela kan jedhamu Itoophiyaa keessa hin jiruu jedhani yeroo dubbatan dhageenyeerra. Kana malees, namoota goginsaan miidhamaniif gargaarsa gochaa jirra; rakkinnichis to’annoo mootummaa jalaa hinbaane yeroo jedhanis dhaggeenyeerra. Itti dabalaniis, lakkoofsi namoota beelaan miidhamnii xiqoodha; uummanni miiliyoona 15 maalqabdi?jedhani yeroo dubbatanis dhageenyeera. Gaafa kaani immoo, biyya keenya keessatti kan uumame beela osoo hintaane goginsa dha; kun immoo waan nam dinqu miti; goginsi yoo ta’e Ameeriikaa Kaaliifoorniyaa keessatti illee kan uumame dha jedhani yeroo falmanis dhaggeenyeera.
Dhugaan jiru garuu kana miti. Yeroo dhiyoo kanatti gaazeexeessaan BBC, Clive Myrie, gara godina Walloo deemuun namoota beelaan dararamaa jirani irratti gabaasa hojjetee ture. Akka gabaasa kanatti namoonni hedduun beelaan akka du’aa jiran fi keessummma daa’immaan balaa kanaan miidhamaa akka jiran gabasaa isaa keessatti ibseera. Rakkinni beelaa naannoo sana jiru hammam hamaa akka ta’e agrasiisuuf gaazeexeesichi, dubartii, Burtukaan Alii jedhamtu wajjin gaafiif deebii taasisee ture. Aaddee Burtukaanis, mucaanshee beelaan akka jalaa du’e imimmaanshee maddishee lamaanirra gadi roobsaa gaazexeechisatti himtee turte.
Mootummaan ADWUI garuu gabaasni BBCn dhiyeessa soba akka ta’e fi maqaa Itoophiyaa xurreessuuf kan yaadame jechuun beeksise.
Adde Burtukaanis, odeeffannoon isheen BBCf kennite akka haaltuufi mucaan ishee kandu’e beelaan osoo hintaane du’a uumamaan akka ta’e, Televiziyoona Amaaraa irratti akka dubbattu dirqisiisan. Addee Burtukaanis waan gootu waanhinqabneef waan isaan godhi ittiin jedhan goote. Mootummaan ADWUI dhugaa lafarra jiru dhoksuuf waan inni gochaa jiruu baay’ee nama ajaa’iba.
Mootumman ADWUI, biyyi guddateetti , diinagdeen biyyitti parsantii 11n waggaoota kurnan darbaniif guddateeraa, nyaataan of dandandeenyeerra jedhee addunyaatti labsaa waan tureef amma immoo deebi’ee ummanni miiliyoona 15 najalaa beela’eera jedhee addunyaatti himuun salphina ta’ee itti argame. Kanaaf haala hundaan, goginsa malee beelli hinjiru jedhee akka dubbatu isa drqisiiese.
Torbee darbe keessa, mootummaan ADWUI gaazexeesitoonni biyya alaa fi hojjettoonni dhaabbilee gargaarsaa bakka namoota beelan hubamanii dhaqanii akka suraa hinkaasnee fi gabaasaa akka hinhojjenne hordoffii cimaan akka irratti godhamu ajaja dabarseera. Kun kan agarsiisu mootummaan ADWUI beela Itoophiyaa keessa jiru dhoksuuf hojjechaa akka jirudha.
Yaaliin godhamaa jiru kun garuu waa’ee beela biyyitti keessatti uumame dhoksuu hindanda’u. Dhugaan jiru uummata Itoophiyaa biras ta’e uummata addunyaa bira erga ga’e tureera. Kanaaf, mootummaan keenya dhugaa jiru dhoksuuf yaalu irra namoota beelaan du’aa fi dararamaa jiraniif gargaarsa barbaachisa ta’e hatatamaan gochuufi qaba.
Gabaasa Clive Myrie aadde Birtukaan Alii dubbisse BBCf gabaase @ http://www.bbc.com/news/world-africa-34783604 ilaaluu ni dandeessu. Akkasumas gabaasa Televiziyoonni Amaaraa aadde Birtukaan yaada BBCf kennitte akka haaltu agarsiisu immoo @ https://www.facebook.com/1573070839616746/videos/1639693446287818/?pnref=story ilaaluu nidandeessu.
Published November 17, 2015 December 25, 2015
Previous Post LEELLOO BAGA NAGAAN NUU DHUFTE!
Next Post Hojiin Obbo Baqqalaa Garbaa Hogabrruu Oromoo Keessatti Bakka Gudaa Qaba